Famerenana: Ny sandan'ny demokrasia nataon'i Amartya Sen - Ikkaro
firosoana >> boky >> Ny sandan'ny demokrasia
Amin'ity lahatsoratra ity Amartya Sen, Nobel Laureate amin'ny toekarena tamin'ny 1998, dia miresaka momba azy ny maha-zava-dehibe ny demokrasia, ny lanjan'izany ary milaza amintsika momba ny angano tsy mitovy izay mipoitra mifandraika amin'ny fanatontoloana sy ny fanatontoloana.
Ilay lahatsoratra navoakan'ny trano famoahana El viejo topo ary miaraka amin'ny dikantenin'i Javier Lomelí Ponce, dia mahatonga antsika hisaintsaina ny vokatry ny demokrasia sy ny dikan'ny firenena iray manangana ity rafitra ity.
Mizara telo ny boky:
Ny demokrasia sy ny fotony manerantany.
Demokrasia ho toy ny sanda manerantany.
Fitsarana momba ny fanatontoloana.
Ny demokrasia sy ny fotony manerantany
Mampifandray ny demokrasia amin'i Gresy taloha isika rehetra. Saingy nasehon'i Sen taminay ohatra ny amin'ny fomba nisy ny demokrasia taloha na tany Andrefana na tany Atsinanana
Tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny ady hevitra isika fa, amin'ny ankapobeny, dia nisy fandeferana lehibe kokoa amin'ny fiarahamonina tsy tandrefana raha oharina amin'ireo any Andrefana. Ny famaritana an'io karazana io dia tsy azo apetraka, satria misy ohatra maro ny fandeferana, ary koa ny tsy fandeferana, amin'ny lafiny roa amin'ity heverina fa fizarazaran'izao tontolo izao ity.
Amartya Sen. Ny sandan'ny demokrasia
Ary mitohy amin'ny zava-misy ara-tantara izany. foana nifantoka be tamin'ny resaka westernization satria io no iray amin'ireo tohan-kevitra lehibe ankehitriny an'ny mpanohitra atsinanan'ny demokrasia
Inona marina ny atao hoe demokrasia?
Fanontaniana tsy azo ihodivirana amin'ity lahatsoratra ity izay mahatonga antsika hisaintsaina sy hanitatra ny fifantohana sy ny fiheverana momba ny demokrasia. Any amin'ireo firenena nananganana sy niorenany dia hitanay fa zony ny mifidy ny solontenantsika. Saingy ny fanovana avy amin'ny fitondrana jadona ho amin'ny demokrasia dia mitaky zavatra betsaka kokoa.
Ny zava-dehibe indrindra izay tsy maintsy omena toky ny fahalalahana maneho hevitra ary hofoanana ny sivana an-gazety
Hanombohana azy dia tsy tokony hialantsika ny fampahafantarana azy amin'ny hevitry ny fanapahana maro an'isa. Ny demokrasia dia mitaky fepetra takiana, toy ny zon'ny mpifidy sy ny fanajana azy amin'ny valim-pifidianana; Saingy mitaky ny fiarovana ny fahalalahana, ny fanajana ny zon'ny mpamorona ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra, ary koa ny tsy fisian'ny sivana amin'ny gazety ary ahafahan'ny vaovao mivezivezy malalaka.
Mitanisa antsika izy, ohatra, toy ny tany amin'ireo firenena manana fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tsy mbola nisy mosary.
Ao amin'ny tantara mahatsiravina misy mosary eto an-tany, tsy nisy na iray aza nitranga tany amin'ny firenena mahaleo tena sy demokratika nankafy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Tsy misy ankanavaka amin'ity lalàna ity, ary tsy maninona na aiza na aiza no jerentsika
Noho izany, ny demokrasia dia tsy ny zo hifidy fotsiny, fa koa amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny zon'izao rehetra izao-
Demokrasia ho toy ny sanda manerantany
Ny tapany faharoa dia ny fanamarinana ny demokrasia ho sanda manerantany.
ny fampiharana ny demaokrasia dia manome ny olom-pirenena ny fahalalàna mifampianatra, ankoatran'ny fanampiana ny fiarahamonina hamorona ny soatoavina ary hametraka ny laharam-pahamehana. Na ny hevitra "filana" izay misy filàna ara-toekarena aza dia mitaky fifanakalozan-kevitra sy fifanakalozam-baovao, fomba fijery ary famakafakana. Amin'io lafiny io, ny demokrasia dia manana asa manorina izay manampy ny lanjan'izy ireo manokana amin'ny ain'ny olom-pirenena sy ny lanjany lehibe amin'ny fanapaha-kevitra politika. Ny fanamarinana ny demokrasia ho toy ny lanjan'izao rehetra izao dia tsy maintsy jerena.
Fitsarana momba ny fanatontoloana
Ny fanatontoloana dia mifanaraka amin'ny ampahatelon'ny lahatsoratra. Amartya Sen miaro hatrany ny tombotsoan'ny fanatontoloana.
Ary mifototra amin'ny ady hevitra maro izany. Ilay mitondra fiara manerana ny bokin'i fa ny demokrasia dia tsy noforonin'ny Tandrefana tahaka ny tsy fanatontoloana. Nandritra ny tantara dia nisy hatramin'ny atsinanana ka hatrany andrefana ary ny mifamadika amin'izany
Izao tontolo izao dia tokony hodinihina amin'ny fiandohan'ny taonan'ny lasa fa tsy amin'ny farany. Tamin'ny 1000 AD, ny fanitarana ny siansa, ny teknolojia ary ny matematika manerantany dia nanova ny toetran'ny Tontolo taloha, fa ny fanaparitahana azy ireo dia nitranga tamin'ny lalana mifanohitra amin'izay hitantsika ankehitriny. Ny haitao avo lenta amin'ny AD 1000 dia misy taratasy, pirinty, tsipìka, vovo-basy, fampiatoana ny tetezana misy rojo vy, kompà andriamby ary kodiarana fikosoham-bary. Ireo zava-maneno rehetra ireo, fahita any Shina, dia tsy fantatra amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny fanatontoloana dia nitondra azy ireo erak'izao tontolo izao, anisan'izany i Eropa. Hetsika mitovy amin'izany no nitranga tamin'ny fitaoman'ny Atsinanana amin'ny matematika tandrefana.
Mampahatsiahy antsika izany ny lesoka amin'ny fanakorontanana ny fanatontoloana sy ny fanatontoloana
Ny fanakorontanana ny fanatontoloana amin'ny Westernisation dia tsy ny tsy fahazoan-kevitra ahistorical ihany, fa koa manelingelina ny sain'ny tombontsoa maro azo avy amin'ny fampiraisana manerantany. Ny fanatontoloana dia dingana manan-tantara izay nanolotra tombony sy tombony be dia be mandritra ny tantara, ary mbola mitohy mandraka ankehitriny. Ny fisian'ny tombontsoa mety hitranga dia mahatonga ny fanontaniana fitsaram-bahoaka mizara ho olana lehibe.
Ny adihevitra faharoa dia mifantoka amin'ny olan'ny fizarana harena izay entin'ny Globalisation ary izany no antony lehibe mahatonga ny fitarainana. Ny fanatontoloana izay mahatonga antsika handroso dia tsy ratsy, fa ny fomba fizarantsika ny tombontsoa azo avy aminy.
Ny kapitalisma eran-tany dia miompana bebe kokoa amin'ny fanitarana ny fifandraisan'ny tsena noho ny fametrahana ny demokrasia, ny fanabeazana fototra, na ny fahafaha-manararaotra ara-tsosialin'ny olona tsy tiana loatra. Ny fanatontoloana ny tsena, raha jerena manokana, dia manantena fomba fijery tsy ampy hamahana ny olan'ny fanambinana ara-toekarena; ilaina ny mihoatra ny laharam-pahamehana novokarin'ny kapitalisma manerantany izay hita avy amin'io fomba fijery io. Araka ny nomarihin'i George Soros, ireo mpandraharaha iraisam-pirenena dia aleony miasa miaraka amin'ireo fitondrana tsy refesi-mandidy matanjaka be noho ny manana demokrasia tsy dia rezika sy mafana fo; ary io dia misy fiatraikany miiba amin'ny mety hisian'ny fivoarana egaliterialy bebe kokoa.
Farano amin'ny fehintsoratra iray tena mahaliana
Ny olana lehibe amin'ity adihevitra ity dia tsy miankina amin'ny fanatontoloana, na ny fampiasana ny tsena ho andrim-panjakana (toekarena), fa ny tsy fitoviana ateraky ny fandanjana ny fifanarahana andrim-panjakana manerantany, miaraka amin'ny fizarana tombony tsy mitovy ny fanatontoloana. Ny fanontaniana, noho izany, dia tsy mifantoka amin'ny tombotsoa azon'ny mahantra manerantany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotran'ny fanatontoloana, fa kosa amin'ny fepetra izay ahafahan'izy ireo mizara amin'ny tena tombony sy tombontsoa marina.
Mendrika fiarovana voaaro ny fanatontoloana, fa tsy fiarovana fotsiny, mila fanavaozana ihany koa.
Amartya Sen, loka Nobel amin'ny toekarena tamin'ny 1998. Teraka tao Bengal (India) tamin'ny 1933, dia rektoran'ny Trinity College, University of Cambridge.
Amin'ny masomboly dia ny data na hevitra heveriko fa mahaliana no tiako holazaina ary momba izay tiako hitarina ny fahalalako.
Manomboka amin'ny lohahevitra ara-tantara aho
Ny boky vita pirinty voalohany eran'izao tontolo izao dia fandikan-teny sinoa avy amin'ny sanskrit an'ny dokam-barotra indiana, fantatra amin'ny anarana hoe Diamond Sutra, avy amina olon-kendry karana iray tiorka antsoina hoe Kumarajeeva, tamin'ny taonjato faha-868, natao pirinty tany Chine nandritra ny efatra sy ny taonjato sasany. taty aoriana, tamin'ny taona XNUMX taorian'i Kristy
Manadihady izay fantatsika momba ity lalàm-panorenana ity
Ny printsy Buddhist Shotoku, ny biraon'ny reniny, Empress Suiko, dia nametraka lalàm-panorenana na kempo, izay fantatra amin'ny anarana hoe 'Constitution Seventeen Article Constitution', tamin'ny taona AD 604. Nifanandrify indrindra tamin'ny fanahin'ny Sata io. Ny fanapahan-kevitry ny daholobe dia tsy tokony hataon'ny olona tokana, fa ataon'ny olona maromaro. " Ary koa »Tsy avela ho tafintohina isika rehefa tsy mitovy amintsika ny hafa. Ny lehilahy rehetra dia manana fo, ary ny fo tsirairay dia samy manana ny fahalalany sy ny fahalalany. Ny mahatsara azy dia ny ratsy ataontsika, ary ny ratsy ataontsika dia ny tsara »
Ny mosary lehibe any Sina. Fizarana ara-tantara dinihina.
Teo anelanelan'ny 1958 sy 1961, dia niaina ny mosary lehibe indrindra teo amin'ny tantara i Sina, izay Sinoa XNUMX ka hatramin'ny XNUMX tapitrisa no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana tao amin'ilay antsoina hoe "Great Leap Forward."
fikarohana Tantaran'ny matematika, Howard Eves taona 1150 AD
Demokrasia sy etika bebe kokoa amin'ny famerenana
Rehefa mieritreritra ireo lohahevitra novakiako dia mihabe ny lanjan'ireo sanganasa.
Tao Ikkaro dia niresaka momba izany izahay Aristote, ny heviny ary ny demokrasia araka ny lalàm-panorenana. Ary koa amin'ny etika miaraka amin'ny Etika ho an'i Amador y Inona no tanjon'ny etika? avy amin'i Adela Cortina, ho fanampin'ireo izay tsy maintsy averiko jerena toy ny Politika ho an'i Amador avy amin'i Fernando Savater sy momba ny fahalalahan'i John Stuart Mill.
Ny fanararaotan'ny fifandraisana nataon'i Ignacio Ramonet
Courses hianarana Mianatra milina, Fianarana lalina ary faharanitan-tsaina artifisialy
1 Ny demokrasia sy ny fotony manerantany
1.1 Inona marina ny atao hoe demokrasia?
2 Demokrasia ho toy ny sanda manerantany
3 Fitsarana momba ny fanatontoloana
3.1 Ny mpanoratra
4 Masomboly hanaraka
5 Demokrasia sy etika bebe kokoa amin'ny famerenana